Home Wararka Guudlaawe “Kursi qof loo xirayo ma jirto, kursi kastaa si furan ayaa...
Guudlaawe “Kursi qof loo xirayo ma jirto, kursi kastaa si furan ayaa loogu tartamayaa”
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa la filayaa in uu maalinta jimcaha soo saaro liiska xubnaha ku tartamaya Aqalka Sare. MW Cali Guudlaawe oo culaysyo badan kala kulmay dhinacyada ku dagaalamaya siyaasadda Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa ugu danbeyntii qaatay go’aan adag .
MW Guudlaawe ayaana go’aansaday in gabi ahaanba uu kursi kataaba si buuxda loogu tartamo, iyada oo cidkastaa oo dani ka hayso tartarkas doorashada Aqalka Sare ay ka qayb gali doonta. Guudlaawe “ Kursi qof loo xirayo ma jirto, kursi kastaa si furan ayaa loogu tartamayaa”.
Talabadaan ayaa soo afjari doonta rajadii ay qabeeen shakhsiyaadka la tartramaya ee laga soo diray Villa Somaliy, kadib markii uu diiday MW Cali Guudlaawe in korsiga loo xiro Villa Somaliya sida ay rajada ka qabeen. Madaama tartanka laga dhigay mid furay waxaan shakui jirin in Xaaji Muse Yalaxoow uu si fudud u difaacan doono kursigiisa.
toddobaadkii dhowaa Xildhibaanada Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa gurigiisa booqasho sharafeed ugu tagay Xaaji Muse, taaso oo boqolkiiba 80% ka dhigeysa in uu si fudud uga guuleysan doono tartamayaasha laga soo diray Villa Somaliya.